သတင်းဆောင်းပါး – Thutastar
တရားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာ
Comments Off on တရားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာ
တရားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာ ——————————— ရွှေတိဂုံဘုရား မဟာမြတ်မုနိ ကျိုက်ထီးရိုး စတဲ့ ဘုရားတွေက အလှူ ခံရ ရှိငွေဟာ အင်မတန် မြားပြားလှလို့ဘဏ်တွေကတောင် အတိုးနဲ့ ပြန်ယူထား ရတယ် တဲ့ သာသနာတော်အတွက် ကိုရင်လေးတွေ လာဘ်လာဘ ချို့တဲ့လို့ သုံးစွဲဖို့ ပြောတော့ ဘုရားကရတဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်နေရာမှာ မှ မသုံးကောင်းဘူး တဲ့ ဘဏ်တွေကျတော့ အတိုးနဲ့ ယူ သုံးတယ် အခု ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျတော့ ဘုရားကြီးဆီက ဆိုပြီး အလှူ ခံတယ် သြော်- – – – – – – –
လူတွေလုံးဝမသိသေးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမ၏သားအကြောင်း ထွက်ပေါ်…
Comments Off on လူတွေလုံးဝမသိသေးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမ၏သားအကြောင်း ထွက်ပေါ်…
မျက်ရည် မခိုင်ရင် တော့ မဖတ်မိစေနဲ့ နော်… “”အမေပြန်မလာခဲ့ဘူး”” အဘွားဆုံးသွားပြီး အိမ်ပြန်တော့ အမေ ပြန်ပါမလာတော့ဘူး ၁၉၈၈ ကျွန်တော့်အသက် ၁၁ နှစ် မေမေရင်ခွင်မှာ နေရတာ မေ့မေ့နဲ့ အတူတူနေရတာ မဝ သေးဘူး အမေ အမေကျွန်တော့်ကိုထားခဲ့ပြီး ကျန်နေရစ်ခဲ့ပြီလေ ၁၉၉၉ အဖေ အသဲအသန်ဖြစ်တယ် အမေ ပြန်မလာခဲ့ဘူး ဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ အဖေ မျက်ဝန်းတွေရဲ့ အကြည့်မှာ အမေ့ကို အရမ်းမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ် အမေ့ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ အဖေ ဟာ အမေ့ကို အပြစ်တစ်လုံးတပါဒ မှာမပြေားရှာဘူးလေ အဖေ ဆုံးသွားတယ် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ကြားက ကြိတ်ပျော်သလိုဖြစ်တယ် အမေပြန်လါမယ်ထင်လို့ ဒါလည်း အမေ ပြန်မလာခဲ့ဘူး အဲ့က လူကြီးတွေကလည်း သားလို
ရန်ကုန်မြို့ အား ဗုံးမိုးရွာခြင်း (၁၉၄၁)
Comments Off on ရန်ကုန်မြို့ အား ဗုံးမိုးရွာခြင်း (၁၉၄၁)
ရေးသားသူ – ကြယ်နီ (သေနင်္ဂ) ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း ၁၉၄၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ဘုရင့်ကြည်းတပ်မတော်ပိုင် လေတပ်ဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့အားစတင်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနေ့သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် မြန်မာမြေပေါ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလည်း ဖြစ်သည်။ စစ်ဆင်ရေးအား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မီချီယို ဆုဂါဝါရာကကွပ်ကဲခဲ့ပြီး မင်္ဂလာဒုံလေယာဉ်ကွင်းနှင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသည် အဓ်ိကပစ်မှတ် ဖြစ်သည်။ စစ်ဆင်ရေးတွင် ဗုံးကြဲလေယာဉ် (၈၀) နှင့် အစောင့်လိုက် တိုက်လေယာဉ် (၃၀) ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဗုံးကြဲလေယာဉ်အများစုသည် Mitsubishi Ki-21 ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ဖြစ်ကြသည်။ အစောင့်လိုက်လေယာဉ်များသည် ပုံစံ ၉၇ ဟုလူသိများသည့် Nakajima Ki-27 တိုက်လေယာဉ်များနှင့် Mitsubishi Ki-30 အပေါ့စားဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ဖြစ်သည်။ Mitsubishi Ki-30 များ သည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောပြတဲ့ ဒီပဲယင်းအတွေ့အကြုံ (မေ့မရတဲ့သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်)
Comments Off on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောပြတဲ့ ဒီပဲယင်းအတွေ့အကြုံ (မေ့မရတဲ့သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောပြတဲ့ ဒီပဲယင်းအတွေ့အကြုံ (မေ့မရတဲ့သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်) ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင် “ဒီပဲယင်း” ၂၀၀၃ ကပေါ့ကျွန်မတို့ အထက်မြန်မာပြည်ကို စည်းရုံးရေးဆင်းတုန်းကစည်းရုံးရေးက ရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုက ပိုများလာပါတယ်။ တစ်ညနေတော့ လမ်းခုလတ်တစ်နေရာမှာ ကျွန်မတို့ကားကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးက လာတားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ကျွန်မကို မိန့်ခွန်းပြောစေချင်တယ်တဲ့။ အချိန်ကလည်း နေဝင်ချိန်ပါ။ ခရီးစမထွက်ခင်ကတည်းက ပြဿနာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်မတို့ကို သတိပေးထားတာလည်းရှိတော့ ကျွန်မက သူ့ကို”မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…အရမ်းနောက်ကျနေပါပြီ…ဒီနေရာမှာဟောပြောဖို့စီစဉ်ထားတာလည်းမရှိပါဘူး..ဆက်သွားစရာရှိလို့ပါ” ပြောတော့ဒါပေမယ့် သူက မရပ်ရပ်အောင် အတင်းကိုပြောနေပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်မတို့ကားတန်းနောက်က လူတစ်ယောက်ပြေးလာပြီးအကြောင်းကြားပါတယ်။ လူအုပ်ကြီးရောက်ချလာပြီးကျွန်မတို့လူတွေကို ရိုက်နှက်နေပြီတဲ့….။ ဒါတွေအားလုံးက ဒီပဲယင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပါ။ ဒီလိုနဲ့ ဝိုင်းရိုက်တဲ့လူအုပ်ကြီးမှာ… “သင်္ကန်းတွေခြုံထားတဲ့ လူတွေလည်းပါပါတယ်” သေချာတာကတော့ သူတို့က ဘုန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့အားလုံးရဲ့ လက်မောင်းတစ်ဖက်စီမှာအဖြူရောင်လက်ကိုင်ပဝါတွေ စည်းထားကြပါတယ်။ ကြည့်ရတာကတော့ သူတို့က အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းက
Comments Off on မြင်ရကြားရတာတွေကမကောင်းဘူး
မကြောက်မလန့် ညအမှောင်ထဲက အတွဲများ သတိထား ဒီကျက်သရေမရှိတဲ့ပုံတွေမတင်ချင်ဘူး ဒါမယ့် ဒီအခြေနေတွေသိနေမြင်နေကြားနေရက်နဲ့မပြောပဲနေခဲ့တာပဲ မအောင့်နိုင်တော့လို့ပြောလိုက်အုံးမယ် ဒီခေတ်ကြီးမှာ မိန်းမတစ်ကောင်နွားတစ်ထောင်မကလောက်ဘူး ဒီအတွဲတွေ ဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့ ညအမှောင် လူပြတ်သူပြတ်နေရာတွေမှာဘာလာလုပ်ကြသလဲဆိုတော့ အဖြေကရှင်းနေတယ် အောက်ကပုံတွေကအဖြေပဲ တွဲစရာ ထိုင်စရာနေရာမရှိလို့လားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး ဒီလိုလုပ်ချင်လို့ကိုဒီလောက် ဓါးထောက်ဆိုင်ကယ်လု ပိုက်ဆံအိတ်လု ရဲအယောင်ဆောင်ငွေညှစ် ဒီလိုအသံတွေခဏခဏကြားနေရတဲ့ကြားကအရဲစွန့်ပြီး……… သွားကြတာ သူတို့ဟွာပြုကြဖို့ဆိုတာရှင်းတယ်ဆိုတော့ မီးမှန်းသိရက်နဲ့ဝင်တိုးတာ မွှန်နေကြလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ် နောက်လဲဖြစ်ကြအုံးမှာပဲ အလုခံရအုံးမှာပဲ ဓါးထောက်ငွေညှစ် ဆိုင်ကယ်လု ဒုစရိုက်မှုအမျိုးမျိုးခံရအုံးမှာပဲ ဒီလိုအမှောက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အမှောင်မှာစောင့်နေတဲ့ဒုစရိုက်သမားတွေဝမ်းသာနေအုံးမှာပဲ ဒီတော့ သမီးရှင်တွေ သတိထားကြ အားလုံးတော့မဆိုလိုဘူး မြင်ရကြားရတာတွေကမကောင်းဘူး ဒီလိုရေးလို့ထားဝယ်သိက္ခချတယ်ထင်လို့ ဆဲချင်သပဆိုလဲဆဲကြ အရှိကိုအရှိတိုင်းရေးတယ် အချိန်မှီထိန်းကြသိမ်းကြ သမီးရှင်တွေသတိထား မိဘတွေကလိုင်းပေါ်ကနေပဲကြည့်လို့ရမယ် အပြင်မှာကိုယ့်သားသမီးဘယ်သွား ဘယ်လာဘယ်မိဘမှကြည့်မနေနိုင်ဘူး ဒီခေတ်မှာ ယောက်ျားရှင်တွေက မူးယစ်ဆေးဝါးလိုင်းထဲရောက်မှာပူရသလို သမီးရှင်တွေက ဒီလိုဟာတွေနဲ့နာမည်ပျက်မှာ ပူရတဲ့အခြေနေပဲ ထားဝယ်မြို့ကကျဉ်းကျဉ်းလေး…။
Comments Off on ပညာရေးဝန်ကြီးသိစေရန်
ပညာရေးဝန်ကြီးသိစေရန်???????? ကျောင်းဆရာ-ဆရာမဘဝ မေးခွန်း သေတ္တာနဲနဲသေးလိုက်ရင်ပိုအဆင်မယ် အစက ကျောင်းမီးလောင်လို ????????ကျောင်းဆရာ-ဆရာမတွေ သေတ္တာသယ်ထုတ်နေတာမှတ်လို့ မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့။ ကျောင်းဆရာ-ဆရာမဘဝ မေးခွန်းကို သေတ္တာနဲ့ထုတ်ရမယ်ဆိုပြန်တော့အခုလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ… ဒီနေ့ လိုင်းပေါ်က တွေ့လိုက်ရတဲ့ ပုံလေးတွေက အသက်ဝင်ပြီး ရီရမလို ငိုရမလိုပါပဲ… ဒီနေ့ ဆိုင်ကယ်တွေ ဆိုင်ကယ်တွေ နောက်က သေတ္တာတွေသေတ္တာတွေနဲ့ စည်ကားလှသောနေ့တစ်နေ့ပါ။ မေးခွန်းကို သေတ္တာနဲ့ ထုတ်ရမယ် ။ဆိုတော့ ၄ တန်း ကတစ်လုံး ၈ တန်းကတစ်လုံးပေါင်းထည့်လို့ မရဘူးဆိုပြန်တော့ စည်ကားနေပါရော။ သေတ္တာဖွင့်ပြီး ထည့်ကြပြန်တော့ ၁၀ ယောက်စာ ၁၅ ယောက်စာနဲ့အထဲ ဂလိုင်ခေါက်နေလေပါရော။ ဆိုင်ကယ်နောက် သေတ္တာကို ကြိုးတုတ် သွားတဲ့လမ်းမှာထူးထူးခြားခြား ကလေး ၂ ယောက် လှမ်းမေးလေရဲ့ … ဦးလေး ရေခဲချောင်း
သူမ နာမည် ဘိုမတဲ့ *ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် ရင်ထဲမကျန်ရင်ကြိုက်သလိုပြော*
Comments Off on သူမ နာမည် ဘိုမတဲ့ *ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် ရင်ထဲမကျန်ရင်ကြိုက်သလိုပြော*
ဘိုမတဲ့ သူနာမည်​ စစ်​ဆင်​​ရေး အ​တွေ့အကြုံ ၃ ​ခေါက်​ရှိပြီး တိုက်​ပွဲ​ပေါင်း များစွားတွင်​ ပါဝင်​ဘူးသူဖြစ်​၏ … စခန်းမှာရှိ​နေစဉ်​ သူမဟာ တစ်​ညလုံး မအိပ်​ပဲ စခန်းခြံစည်းရိုးအတွင်း တစ်​​လျှောက်​ ကင်း​စောင့်​​နေတတ်​သည်​​ … ဘိုမဟာ ​နေရာ​ဒေသကိုကြည့်​ပြီး အလိုက်​အထိုက်​ ​နေတတ်​သူဖြစ်​ကာ စစ်​​ကြောင်းသွားရင်​ သူက ​ရှေ့ဆုံးကသွားရမှ ​ကျေနပ်​သူ … ဘိုမဟာ စစ်​​ကြောင်းသွား​နေရင်း​ မသင်​ကာစရာတစ်​ခုခု​တွေ့ရင်​ ​ရောက်​တဲ့​နေရာမှာ ဝပ်​ပြီး အဲ့​နေရာကိုကြည့်​ကာ အချက်​​ပေးတတ်​သည့်​အကျင့်​ သူမှာရှိသည်​ ( ဘိုမရဲ့ ဒီအကျင့်​ကို စစ်​​ကြောင်းရှိ စစ်​သည်​​တွေ သိ၏ ) ရန်​သူနဲ့ကြုံတိုင်း ဘိုမရဲ့ အချက်​​ပေးသံ​ကြောင့်​ မိမိဘက်​မှ လက်​ဦးမှုအမြဲရသည့်​ စစ်​​ကြောင်းအဖြစ်​ သူပုန်​​လောကတွင်​ နာမည်​ကြီးလာ၏ … ဘိုမဟာ ​ပေးမှ ​ကျွေးမှ စားတတ်​သူဖြစ်​လို့
ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို အချိန်ရှစ်နာရီနဲ့ သွားရောက်နိုင်အောင် ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်မည်
Comments Off on ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို အချိန်ရှစ်နာရီနဲ့ သွားရောက်နိုင်အောင် ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်မည်
ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို အချိန်ရှစ်နာရီနဲ့ သွားရောက်နိုင်အောင် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင် ပေးသွားမယ်လို့ ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E.Mr. Taro KONO ကပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ တွေ့ဆုံအပြီး ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အခုလိုပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်မှာ ရန်ကုန်ကနေ တောင်ငူကို သုံးနာရီခွဲနဲ့ သွားရောက်နိုင် အောင်နဲ့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးကို ရှစ်နာရီနဲ့သွားရောက်နိုင် အောင် ရထားလမ်း အဆင့်မြင့်တင် သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံအနေ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီထောက်ပံ့ သွားဖို့ ရှိပြီး သီလဝါ
မိဘ တွေ ရင်လေး ဖွယ်ရာ ရန်ကုန် ယဉ်ကျေး မှုကြီး ( သမီးရှင်များ ဖတ်ကြည့်ပါ )
Comments Off on မိဘ တွေ ရင်လေး ဖွယ်ရာ ရန်ကုန် ယဉ်ကျေး မှုကြီး ( သမီးရှင်များ ဖတ်ကြည့်ပါ )
စန်းစန်းတစ်ယောက် လမ်း လျှောက်ရင်းဖြင့် လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၁၀ နာရီ ထိုးပြီ။ သို့နှင့် ခဏရပ်ပြီး ပိုက်ဆံအိတ် ထဲရှိ ဆေးကဒ်အတွင်းမှ လက်ကျန် ဆေးတစ်လုံးကို ထုတ်သောက်လိုက် သည်။ ဆေးနှစ်လုံးသာပါသည့် ဆေး ကဒ်က ကုန်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် လွှင့် ပစ်လိုက်သည်။သူမသောက်လိုက်သည့် ဆေး သည် ပျိုရွယ်သူများအကြား အသိ များသည် Ecee2ဟုခေါ်သော အ ရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးဖြစ်သည်။ ထိုဆေးကို အရေးပေါ်သန္ဓေတား ဆေးအဖြစ် လူသိများပြီး လိင်ဆက် ဆံပြီး ၇၂ နာရီအတွင်းသောက်ပါက ကိုယ်ဝန်မရပေ။ မနေ့ည ၁၀ နာရီက ပထမဆေး တစ်လုံးကို သောက်ပြီးပြီဖြစ်သည့်အ တွက် နောက် ၁၂ နာရီအကြာ မ နက်
Comments Off on တုနှိုင်းမဲ့ သစ္စာတရား
တုနှိုင်းမဲ့ သစ္စာတရား မြန်မာပြည်…….ပြည်နယ်၏ စစ်ဆင်ရေးဒေသ…. မှောင်မိုက်သော ည. ၁၁နာရီချိန်ခန့် ရှိတော့မည်။ သာမန်လူများအိပ်မောကျနေချိန်…. သို့ရာတွင် မှုန်ပြပြလရောင်အောက်တွင် မြေခင်းစဖြင့် ဖြစ်သလိုထိုးထားသော ယာယီတဲလေးအတွင်း၌ ဗိုလ်မှူး မျိုးခိုင်တစ်ယောက် စစ်ဆင်ရေးသုံး မြေပုံကို အသေးစိပ် ကြည့်ရှု​နေမိသည်။ သူတွေးမိသည့်အတိုင်းဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူ့တပည့်ကျော်တစ်ယောက်အား ခေါ်၍ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ခွဲမှူးဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီးကျော်သက်ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ခအကြာတွင် ဗကကျော်သက်ရောက်လာသည်။ တဲအတွင်း အလေးပြုဝင်လာသည်။ လူက ခပ်ပိန်ပိန်..မျက်လုံးအစုံက စူးရှနေဟန်….. ဗိုလ်​မှူး မျိုးခိုင်က ပြောလိုက်ပါတော့သည်။ `”ညီလေး…´´ အကိုတို့ ခုတိုက်နေတဲ့ စခန်းက သုံးဘက်လုံး ချောက်ကမ်းပါးခံထားတယ်။ အရှေ့ဘက် တက်လမ်းကို ဒီကောင်တွေ စက်လတ်​နဲ့ ပုံသေဆင်ထားတာ ဆက်တိုးရင် ငါတို့လူတွေ ပိုအထိနာလိမ့်မယ်ကွာ…´´ “အဲ့ဒီတော့…အကိုတို့ စွန့်စားကြည့်မယ်ကွာ…´” “ဟုတ်…ဗိုလ်မှူး´´ “ဘယ်လို စဉ်းစားထားလို့လဲ…´´